Barlamaanka Galmudug oo doortay madaxweyne goboleed cusub - Sabahionline.com
Barlamaanka Galmudug oo doortay madaxweyne goboleed cusub
Agoosto 02, 2012
Barlamaanka Galmudug, oo iminka shaqeeynayay todobaad, ayaa Arbacadii (1-dii August) madaxweyene u doortay Cabdi Xasan Qeybdiid.
Hoggaamiyayaasha Soomaaliya oo meel-mariyay dastuurka qabyada ah
Qeybdiid, oo ahaa taliyihii hore ee ciidanka bilayska Soomaaliya, ayaa in dhawaalaba ku dhex-jiray siyaasadda Galmudug waxaana uu sheegay in uu qorsheeynayo in uu ka shaqeeyo arrimaha ammaanka, lana dagaallamo khatarta ay gobolka ku hayaan burcad-badeedda iyo al-Shabaab.
"Gobollada Dhexe waxa ka taagan khataro ammaan oo ay sababeen, af-duubyo, burcad-badeed iyo al-Shabaab," ayuu Qaybdiid ku yiri Sabahi. "Kooxahani waxa ay iyagoo firaxada [soo weeraraan] meelihi looga adkaaday. Taasi waxay kamid tahay waxyabaha aan xogga saarayo iyadoo aan iska kaashanayno Qaybaha Bulshada." Qaybdiid waxa uu sidoo kale soo dhaweeyay meel-marinta dastuurka cusub ee Soomaaliya. "Waa tallaabo horay loo qaaday, Waxanan filayaa in laga wada-hadli doono sida looga shaqayn doono arrimaha haray," ayuu yiri.
Barlamaanku waxa uu sidoo kale madaxweyen ku-xigeen dib ugu doortay Cabdisamad Nuur Guuleed oo la shaqayn jiray madaxweyne Maxamed Axmed Caalin. Caalin ayaa Nairobi u jooga arrimo caafimaad.